Meptazinol (မပ်တဇီနိုးလ်) : ဘာအတွက်အသုံးပြုရတာလဲ။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဘာတွေရှိလဲ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေရောသောက်လို့ရလား။ Hello Sayarwon
Meptazinol (မပ်တဇီနိုးလ်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Meptazinolကိုခွဲစိတ်ပြီးနောက်နာခြင်း၊ ကလေးမွေးစဉ်နာခြင်းနှင့် ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်သောကြောင့် ဆီးလမ်းကြောင်းနာခြင်းတို့အပါအဝင် အလတ်စားမှ အပြင်းစားနာကျင်ခြင်းတို့အားကုသာရာတွင် အသုံးပြုပါသည်။
Meptazinolကိုတခြားအသုံးများအတွက်လည်းပေးနိုင်ပါသည်။ အချက်အလက်များထပ်မံသိလိုပါက ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ကိုမေးပါ။
Meptazinol (မပ်တဇီနိုးလ်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
ထိုးဆေးပုံစံဆိုပါကဆေးခန်း၊ ဆေးရုံတို့တွင် ထိုးပေးပါလိမ့်မည်။ ဆေးကိုလိုအပ်သလို ၂-၄ နာရီတိုင်းထိုးရနိုင်ပါသည်။ မေးလိုသည်များရှိပါက ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။
သောက်ဆေးဆိုပါကရေနှင့်သောက်ပါ။ ဝါးမစားရ။ မကြိတ်ချေရ။ ဆေးပြားတစ်ခုလုံးကိုမျိုချပါ။
Meptazinol (မပ်တဇီနိုးလ်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Meptazinolကိုတိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နှင့် စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားခြင်းကအကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းနည်းပင် ဖြစ်သည်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်ခြင်းနှင့် ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုများမဖြစ်စေရန် Meptazinolကိုရေချိုးခန်းတွင်သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းခြင်းမျိုးမပြုလုပ်ပါနှင့်။ Meptazinolဆေးအမျိုးအစားနှင့် ဆေးထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီးသိမ်းဆည်းသောပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုများရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့အတွက် ဆေးဘူးအခွံ၌ပါသောသိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှု ညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်းသို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူအားမေးမြန်းခြင်းကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရစေရန်အတွက် ဆေးဝါးအကုန်လုံးကို ကလေးများ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များနှင့်ဝေးရာတွင်ထားပါ။
Meptazinolအားအိမ်သာထဲပစ်ချခြင်း၊ ရေထွက်ပေါက်များမှ ဆေးချခြင်းမျိုးအားမလုပ်သင့်ပါ။ ဆေးဝါးများကို မလိုအပ်တော့သည့်အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားသည့် အခါများတွင် စနစ်တကျစွန့်ပစ်ရန် အရေးကြီး၏။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျ မည်ကဲ့သို့စွန့်ပစ်ရမည်ဆိုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်၏ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်နိုင်ပါသည်။
Meptazinol (မပ်တဇီနိုးလ်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Meptazinolတွင်ပါသော active agent များ inactive agent များနှင့် ဓါတ်မတည့်မှုရှိလျှင်။
Monoamine-oxidase inhibitors (MOAIs)ဆိုသောဆေးများကိုသုံးနေလျှင်၊ သို့မဟုတ် ပြီးခဲ့သည့် ၁၄ ရက်အတွင်းရပ်ထားလျှင်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Meptazinol (မပ်တဇီနိုးလ်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ယခုဆေးဝါးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင် အသုံးပြုလျှင် ဆိုးကျိုးများရှိမရှိဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက် လုံလောက်သောလေ့လာစမ်းသပ်ချက်များမရှိပါ။ ဆေးမသောက်သုံးမီတွင် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောကောင်းကျိုးများနှင့် ဆိုးကျိုးများအားလုံးကိုချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက် သင့်ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။
Meptazinol (မပ်တဇီနိုးလ်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
Meptazinolကြောင့် အောက်ပါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။
ပျို့အန်ချင်သလိုဖြစ်ခြင်း၊ အစာမကြေခြင်း၊ ဗိုက်နာခြင်း
ဘယ်ဆေးတွေက Meptazinol (မပ်တဇီနိုးလ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Meptazinolသည် သင်အခုသောက်သုံးနေသည့် တခြားသောဆေးဝါးများနှင့် ဓါတ်ပြုမှုများဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးအာနိသင်ပြောင်းခြင်းနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်လာနိုင်သောပြောင်းလဲမှုများဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မလိုလားအပ်သောဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုများမဖြစ်လာစေရန် သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေသောဆေးဝါးများအားလုံးကိုစာရင်းပြုစုထားပြီး (စာရင်းလုပ်သည့်အခါ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားသည်များ၊ မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေသည်များ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းများ အားလုံးပါရပါမည်။) ဆရာဝန် သို့မဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူအားအမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးများကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါပဲသောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏပြောင်းလဲခြင်းများမပြုလုပ်ပါနှင့်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Meptazinol (မပ်တဇီနိုးလ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Meptazinol က အစားအသောက် သို့မဟုတ် အရက်သေစာနှင့် ဓါတ်ပြုမှုများဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်လာနိုင်သောပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မလိုလားအပ်သည့် ဓါတ်ပြုမှုများမဖြစ်လာစေရန် အစားအသောက်၊ အရက်သေစာများနှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကိုမေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Meptazinol (မပ်တဇီနိုးလ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Meptazinolသည် သင်၏ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနှင့် သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုများရှိနိုင်ပါသည်။ သင်၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေအားပိုဆိုးသွားစေခြင်းသို့မဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားခြင်းများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင်၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကိုသင့်ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးရန်အရေးကြီးပါသည်။
အက်ဒရီနယ်ဂလင်းတွင် အကျိတ်ဖြစ်ခြင်း (phaeochromocytoma)
ခေါင်းထိခိုက်ထားခြင်း၊ သို့မဟုတ် ဦးခေါင်းတွင်းဖိအားများခြင်း
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Meptazinol (မပ်တဇီနိုးလ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
သတ်မှတ်ထားသောပမာဏမှာ200mgကို ၂-၆ နာရီခြားတိုင်းတစ်ခါသောက်ရန်။ များသောအားဖြင့် ၄ နာရီခြားတစ်ကြိမ်။
ကလေးတွေအတွက် Meptazinol (မပ်တဇီနိုးလ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Meptazinol (မပ်တဇီနိုးလ်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Meptazinolကိုအောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။
200mg Film-Coated ဆေးပြား
Meptazinolကိုသုံးစွဲဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရသည့်အချိန်တွင် အမြန်ဆုံးသုံးပါ။ သို့သော်လည်းနောက်တစ်ကြိမ်သုံးရမည့်အချိန်နှင့် နီးကပ်နေပြီဆိုပါကလွတ်သွားသောအကြိမ်ကိုကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်၌ပင်သုံးလိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏအား နှစ်ဆတိုးတာမျိုးမလုပ်ပါနှင့်။
Meptazinol. http://drugs.webmd.boots.com/drugs/drug-296-.aspx?drugid=296&drugname=. Accessed February 25, 2017.
Meptid Tablet. https://www.medicines.org.uk/emc/medicine/21240. Accessed February 25, 2017.
Meptid Injections. https://www.medicines.org.uk/emc/medicine/21242. Accessed February 25, 2017.